Ny fotoana fampiasana bateria hatramin'ny niverenan'ny fiampangana farany dia One UI 3.0 | Androidsis
Ny iray amin'ireo fanovana tsy takatra loatra hitanay tao amin'ny Android dia ny fiovana amin'ny fampisehoana ny fotoana fampiasana bateria. Ary izany ve ao amin'ny One UI 3.0 dia mamerina ny fotoana fampiasana bateria hatramin'ny fiampangana farany.
I mean, nanao ahoana foana ary nahafahanay hahafantatra ny isan'ny ora niasan'ny finday mandra-pandoany azy indray. Zava-baovao lehibe izay tsy voamariky ny maro, fa isan'andro isan'andro dia ahafahantsika manombana tsara kokoa ny fomba fitantanana ny findaintsika.
Ao amin'ny Ny androm-piainan'ny Android ankehitriny dia aseho mandritra ny andro. Izany hoe, ny ora fisian'ny efijery dia aseho miaraka amin'ireo bara azo izay ahafahantsika manao fampitahana. Fa rehefa tonga ny manosika, ny hery ahafantarana marina ny ora hatramin'ny nanatanterahantsika farany ny finday dia saika nesorina tamin'ny masontsika.
Fampisehoana bateria amin'ny One UI 2.5
Araka ny hitantsika amin'ny sary omena, ny ora sisa dia miseho miaraka amin'ny habetsaky ny isan-jato bateria sisa tavela. Ka miverina amin'ny fomba fanaony isika tamin'ny One UI 3.0 ary izay efa fantatsika ny ankamaroan'ny zava-baovao.
El Ny fiovan'ny ranomasina dia mitoetra ao amin'ilay fakana sary an-tsary ary ny fihetsiny rehefa mandeha ny fotoana avy amin'ny fikirakirana bateria, ary mamela antsika hiditra amin'ny "fampiasana bateria" aza izy io.
Una niverina tany aloha fa toa nahatakatra tsara an'i Samsung hiala amin'ny fomba ahazoan'ny Google ny Android amin'ireo fanovana izay ampiasainy amintsika indraindray. Fantatrao, raha mila tadiavina manokana ianao ary miorina tsara amin'ny traikefa Android, dia ho eo foana i Samsung miaraka amin'ny UI iray, ary na dia ese 2.5 mba hamela ny fihetsika amin'ny mpandefa antoko fahatelo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Ao amin'ny One UI 3.0 ny fotoana fampiasana bateria hatramin'ny niverenan'ny fiampangana farany (farany)